Ukukhuphela i-PayMaya Apk kwi-V2.63.1 yasimahla kwi-Android [Wallet]
I-PayMaya Apk Khuphela i-v2.63.1 yasimahla kwi-Android [i-Wallet]
Apha ndiza kwabelana ngolunye lwee -apps ezikhuselekileyo ze-E-Wallet. Ngokwenyani ndithetha nge-PayMaya Apk onokuyikhuphela ngoku ngokusebenzisa ikhonkco elinikezwe apha ngezantsi.
Inikwe umda kwingingqi ethile endiya kuthi ke ndiphinde ndibelane ngayo kuphononongo. Ungaqhubeka ngokwazi malunga neempawu ezisisiseko seapp emva kokufunda lonke olu phononongo.
Yintoni iPayMaya Apk?
Uyikhuphela kwaye uyisebenzise njani i-PayMaya Apk?
I-PayMaya Apk yi-e-wallet onokuyisebenzisa ukonyusa imidlalo, ukuhambisa imali, idiphozithi, nokunye okuninzi. Inika ikhadi elibonakalayo labo bafuna ukuthenga kwi-Intanethi. Unokuba nenketho yokubhukisha amatikiti enqwelomoya kwi-intanethi ngendlela ekhuselekileyo yokuhlawula.
Eyona nto intle kukuba unokuyikhuphela simahla kwaye unikezela ngeenkonzo ngexabiso eliphantsi. Ungasentla okanye uthenge i-UC yePUBG Mobile kwaye ufumane inani elingenamda leedayimane zeMidlalo yeBali Bang Bang. Nokuba mininzi eminye imidlalo onokuthi uyongeze.
Inye yezona zipaji zikhuselekileyo kwiiPhilippines. Ke, ngokusisiseko, yenzelwe abantu basePhilipines. Unokuzikhuphelela kwaye ujoyine usetyenziso ukuze uthumele imali yakho kwiakhawunti yakho yebhanki. Ke, ngale app, ungayisebenzisa kwimicimbi ye-Intanethi.
Uya kufumana ukhetho lokuhlawula kwezi venkile okanye kwiivenkile ezinkulu ezixhasa ii-ATM okanye amakhadi etyala. Ke, ungaqhagamshela okanye uqwalasele ikhadi lakho elilukhuni lePayMaya kwi-app emva koko wenze iintlawulo. Ungaqhubeka nokulawula ibhalansi kunye nezinye iinkcukacha.
Ukuba izabelo zeSMS kunye nezaziso ze-imeyile kwintengiselwano nganye kunye nomsebenzi. Ke, ngenxa yoko, unokugcina ibhalansi yakho kunye nesipaji sikhuselekile kubagculeli nakwabasemzini. Zama ezinye izipaji ezinje Fumana uDana kwaye I-Bajaj Wallet kodwa ezi zisebenza kwimimandla eyahlukeneyo.
ubungakanani 55.09 MB
Igama lepakheji com.paymaya
umbhekisi Imbuyekezo PayMaya Philippines, Inc.
Iyafuneka i-Android 4.1 kunye phezulu
Nazi ezinye iingongoma ezibalulekileyo endifuna ukuzabelana nawe. Kuba ndiqinisekile ukuba uninzi lwabantu lufuna ukwazi ukuba iPayMaya Apk ibonelela ngantoni. Ke ngoko, ndiza kuchaza ezinye zezona zinto zibalulekileyo kuwe. Ezi zinto zilandelayo.
Kusimahla ukukhuphela kwiifowuni eziphathwayo ze-Android.
Unokwenza ukuthengiselana ngexabiso eliphantsi.
Dlulisela imali kwezinye iiakhawunti zebhanki.
Yenza izinto kwi-Intanethi.
Unokunika iintlawulo ezivenkileni nakwiivenkile ezinkulu ezixhasa ii-ATM kunye namakhadi etyala.
Bhukisha amatikiti enqwelomoya kwi-intanethi.
Kukhuselekile kwaye ufumana utshintsho lweSMS.
Phezulu kwimidlalo emininzi oyidlalayo kwiiPhilipines.
Ukuze uxhamle kwi-PayMaya App, kufuneka ukhuphele i-Apk yayo kwaye uyifake kwifowuni yakho. Apha kweli phepha, uya kufumana amakhonkco amabini ngokuthe ngqo kuqala kunikwe enye ekuqaleni kwaye eyesibini inikwe ekugqibeleni.
Ke, ungasebenzisa naluphi na unxibelelwano ukufumana i-Apk. Emva kwexesha ungacofa kule fayile kwaye uyifake kwifowuni yakho. Ngoku kufuneka usungule usetyenziso kwifowuni yakho kwaye unike zonke iimvume ezibuziweyo.
Cofa kwindawo yokubhalisa ukuba uyisebenzisa okokuqala. Emva koko nika zonke iinkcukacha ezifunekayo. Ngoku ungangenisa ulwazi kwaye uqinisekise iakhawunti yakho.
Konke oku kuphononongo apho ndizamile ukukwazisa ngePayMaya Apk. Ukuba unomdla, emva koko unokuzikhuphelela ngokusebenzisa ikhonkco elinikezwe apha ngezantsi. Inguqulelo yamva nje kunye nesemthethweni yeapp.
exhonyiweyo appsephawulweyo PayMaya Apk, Isixhobo sePayMaya, Khuphela iPayMaya